A na-eji tankị GFS eme ihe n'ebe nchekwa mmiri. Ọ nwere ike ibute ọtụtụ mmiri ma ọ bụ mmiri pụrụ iche, dị ka brine, mmiri dị ọcha, mmiri deionized, mmiri nnu, mmiri dị nro, mmiri RO, mmiri deionized na ezigbo mmiri dị ọcha. A na-achịkọta tankị GFS nke ụlọ ọrụ anyị sitere na efere ọla alloy pụrụ iche, ihe mkpuchi pụrụ iche, mkpọchi na-ejide onwe ya na ihe ndị ọzọ, na-eji ndụ ọrụ karịa afọ iri atọ. Mgbe emechara mgbanye ahụ, titanium alloy pụrụ iche nchara bụ c ...
Ọ dị mfe ịwụnye, jikwaa ma mezuo mkpa mmiri dị iche iche. N'otu oge ahụ, nyocha ntọala na ntọala nke tankị bụ atụmatụ dị mkpa maka arụmọrụ nchekwa nke nnukwu tank.A na-agbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ petrochemical, a ga-enyocha usoro nyocha nke injin injinia site na nyocha nke ntọala, site na ntọala dum, ala dị nro, ntọala ala na ntọala ala pụrụ iche, nwapụtara na ọkwa dị iche iche, ma na-ebute n'ihu kwekọrọ ...
GFS tank nwere ezigbo nrụgide corrosion ma na-ejikwa ya ebe niile iji chekwaa acid na alkali na osisi. A na-efesa enamel ahụ n’elu efere nchara, mgbe ahụ, a na-eme mmehie dị elu iji mee ka elu nke ihe nchara na-eguzogide ala. Enamel elu dị larịị, glazed ma jiri sealant pụrụ iche mechie ya ma dị mma maka ọtụtụ ebumnuche nchekwa mmiri. Ọ bụrụ na ebe nchekwa kemịkal na-echekwa ebe nchekwa kemịkalụ,